Portal:Talyaaniga - Wikipedia
Astaanta qaranka talyaaniga
Jamhuuriyadda Talyaaniga (Talyaani):(Repubblica Italiana) Waa dal dhaca juqraafi ahaan Koofurta Yurub ee Jasiirad la mooda talyaaniga sidoo kale waxaa ku yaalla labada jasiiradood ee ugu waawayn Bada Midatareeniyan: Sishiliya iyo Sardeenya. Sidoo kale waxay la wadaagtaa xuduud wuqooyiga Alpi lana wadaagta Faransiiska, Iswisarland, Austria iyo Isloveeniya. Sidoo kele waxaa gudaha talyaaniga ku dhexyaal laba dawladood madax-bannaan waana Jeebkujir San Marino iyo Magaalada faatikaanka, sidoo kale waxaa jira Jeebkujir Campione d'Italia ee gudaha Iswisarland. Bedka Talyaaniga 301,338 km2 waxaa saameeya Heerkul dhexdhexaad ah. waxaa deggan 60.2 malyan oo qof waana dawladda lixaad marka laga eego dhanka tirada dadka, waxa ay ka soo gashaa heerka 23 dawlaha ugu dadka badan caalamka .
Wxay ahayd dhulkii loo yaqiin maantana aha Talyaaniga halka ay ka soo bilaabatay ilbaxnimada shacabka yurub sida Etruski iyo Romaanka. Sidoo kale waxay ahayd caasimadda talyaaniga Roma Qarniya badan xarunta siyaasadda lagana bartay cilmiga iyadoo ahayd caasimadda Imbaraatooriyaddii roomaanka. Kaddib dibudhac ku yimid imaraatoooriyadda roomaanka Itaaliya waxay la kulantay duullaanno kaga imaanaya shucuubta Jarmaniya sida Ostrogoth iyo shacabka lombardiya iyo qabiilada norman waxaa sii xigay bisantiiniyiinta. qarniyaal ka dib italiya waxay noqotay Horukac cilmi taasoo ahayd dhaqdhaqaaq fikradeed aadna miradhal u noqotay sugtayna awoodeedasamaynta jiho fikir Yurub.
Badanaa taariikhda italiya kaddib roomaanka، waxay noqotay wax kala go'go'an dowlad goboleedyo (sida Booqrtooyada saredeenya, Boqortooyada shishiiliya Maamulka Milaano)، laakiin midowga dalka sanaddii 1861 kaddib waqti fadqalalo ah ee taariikhda soo martay loona yaqaan "dib u curasho". dabayaaqadii qarnigaa 19aad ee Dagaalkii Koowaad ee Aduunka ilaa Dagaalkii Labaad ee Aduunka talyaanigu waxa uu isubedelay gumeeyste halka uu gaaray xukunkiisa Liibiya, Elitareeya, Soomaaliya, Itoobiya iyo Albaaniya.
Portal:Talyaaniga/Maqaal xul ah/3
Magaalo xul ah
Dooro nuuc ku habboon qaybtaan, haba ahaadee doorsoome ama ma doorsoome IWM..?
Ka kooban Doorsoome
Liiska sare •
Sawir banarama •
Sawir muujiye •
Portal bahwadaag •
Portal laga guuray •
Related portals1 •
Related portals2 •
Related portals3 •
Bogga Caawinaadda (Wikipedia:Portal/Bedelid)
Goobo caan ah
Naadi talyaani ah
Gobol xul ah
Mashruuca wikiga talyaaniga
Qodobo ku saabsan
Halka lagaga tallabo portal
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Talyaaniga&oldid=200749"
Last edited on 8 May 2020, at 16:31
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 May 2020, marka ee eheed 16:31.